[Ultimate Guide] Zvese Nezve Kumisikidza Digital Billboard
Chii chinonzi Digital Billboard Advertising?
Musiyano Pakati Yechinyakare Billboards uye Digital Billboards
Ndezvipi Zvakanakira Kushandisa Digital Billboards?
Nzvimbo Dzakakodzera Kumisikidza Digital Billboards
Marii Inodhura Kuisa Digital Billboard?
Zvinhu Zvokufunga nezvazvo Paunenge uchiisa Digital Billboard
Kushambadza kwedhijitari kwave kujaira kushambadzira kune angangoita ese maindasitiri nemabhizinesi.Wanga uchiziva here kuti vashambadziri vekuUS vakashandisa zvakawanda pakushambadzira kwedhijitari muna 2020 ne15% kunyangwe denda iri?Imwe yedzakajairika nzira dzekushambadzira kwedhijitari ibhodhi redhijitari.Adigital billboardmudziyo wemagetsi wekunze wekushambadzira unoratidza meseji ine simba.Mabhodhi edhijitari anowanzo kuwanikwa mumigwagwa mikuru, migwagwa ine vanhu vakawanda uye munzvimbo dzine vanhu vakawanda kuti vabate tarisiro yevatyairi, vanofamba netsoka kana vafambi.
Munzvimbo dzakasiyana dzepasi, seAsia, zvikwangwani zvedhijitari zvakazopfuura zvechinyakare zvekunze zvepanze.MuUS, fungidziro dzinoratidza kuti kushambadzira kwedhijitari kwekunze kuchave hafu yemari yakazara yekushambadzira kwekunze muna 2021.
Zviteshi zvemadhijitari zvakaita semasmartphone nemakomputa zviri kuwanda mazuvano, uye vanhu vari kutendeudzira kutarisa kwavo kunyika chaiyo uye kuita zvikwangwani.Chii chinonzi mabhodhi edhijitari, uye basa rei ravanoita mukushambadza?Tsvaga zvimwe pazasi.
Sezvineiwo, dhijitari yekunze-ye-imba bhiriboard advertising inoitwa kuburikidza nehombeLED billboard kuratidza.Aya mabhodhi edhijitari anogona kuiswa munzvimbo dzepakati petsoka dzakakwirira, migwagwa mikuru, kana kupi zvako kunodiwa.Digital billboard advertising inzira inoshanduka uye inogoneka yekushambadzira.Dhijitari bhodhi rebhodhi rinogona kuchinjwa mukati memasekondi kana zvichidikanwa, nekuda kwegore-based content management systems (CMS).
Digital billboard marketing inoonekwa seine pundutso mukufamba kwenguva.Kazhinji, inodhura zvakanyanya pane zvechinyakare bhiriboard advertising.Nekudaro, ine ROI yepamusoro pane yakajairika nzira.
Nekubata mutsauko uripo pakati pedhijitari kanaLED mabhodhiuye mabhodhi echinyakare kana akamira, bhizinesi rinogona kuona kuti ndeipi nzira yekushambadzira inoenderana nezvarinoda.Nekukurumidza kufambira mberi kwetekinoroji kuseri kwezvikwangwani zvekushambadzira, vangango shambadza vane sarudzo yakaoma pamberi pavo.
Ndechipi chiri nani pakati pemabhodhi edhijitari nemabhodhi echinyakare?Chokwadi, sarudzo dzese dziri mbiri dzine zvakakosha.Sarudzo inowira kune vangangove vatengi vekambani, bhodhi rekuisa, uye bhajeti rekushambadzira rekambani.Nezvinhu zvakadaro, bhodhi rechinyakare rinogona kuratidza kushanda kupfuura bhodhi redhijitari, kana zvinopesana.
Pazasi pane dhijitari bhodhi vs yechinyakare bhodhi kuenzanisa-zvichibva pane akasiyana maficha-kukubatsira iwe kuona yakanakisa sarudzo yebhizinesi rako.
1. Zviri mukati
Bhabhodhi redhijitari rinogona kuratidza mhando inofamba yezvirimo, nepo bhodhi rechinyakare richingoratidza mufananidzo wakadhindwa chete.
Chikwangwani chedhijitari hachitangi kusvuura kana kuoneka sechakasviba.Inotaridzika yakajeka, yakanaka, uye yakanaka kunyangwe husiku.Nekune rumwe rutivi, zvikwangwani zvechinyakare zvishoma nezvishoma zvinotaridzika zvakasviba uye kupera mushure mekushandisa nguva nenguva kunze kwekunge posita ichitsiviwa nguva nenguva.
Mune bhodhi redhijitari, iwe unogovera skrini nguva nevamwe vakati wandei vashambadziri vemhando.Nekudaro, mune yechinyakare bhodhi bhodhi, ndeye yakasarudzika.Shambadziro yako ndiyo yega inoonekwa pabhodhi reimwe nguva.
4. Kuchinja Mharidzo
Dhijitari bhodhi bhodhi inogona kuchinja pakati peakawanda mameseji, ichikubvumidza iwe kuchinjana pakati peakasiyana ads.Nekune rimwe divi, bhodhi rechinyakare harichinjiki pasina kuunza mari yekuwedzera kana chinyorwa chadhindwa.
Dhijitari ye LED bhodhi inobvumidza iwe kuronga uye kushambadza panguva dzepamusoro uye kwenguva shoma, nepo iwe usingakwanise kuita kuronga mune yechinyakare bhodhi.
Bhabhibhodhi redhijitari rinowanzodhura kupfuura bhodhi rekare.Bhero rechinyakare rinogona kunge rakachipa, asi rinouya nemari yekuwedzera senge mari yekuisa nekugadzirisa.
Kazhinji, marudzi ese ezvikwangwani ane zvaakanakira.Tora nguva yekusarudza kuti ndeipi yakanakira bhizinesi rako zvaunoda.
Iko Kuchengetedza Mutengo
Haufanire kubhadhara chero mari yekudhinda kana yebasa paunenge uchiisa adigital LED bhodhi, zvichikubatsira kuchengetedza mari yekugadzira.
Inovandudza Mutengi Zvakaitika
Mutengi ruzivo chinhu chakakosha chekushambadzira.Parizvino, mabhureki nemabhizinesi ari kuvimba zvakanyanya nedhijitari nzira yekupa vatengi zviitiko zvitsva.Kuti uve nechokwadi chechiitiko chinokwezva chevatengi, vashambadziri vanosarudza kupa ruzivo zvine simba, semuenzaniso, kuburikidza nemabhodhi edhijitari.Idhibhodhi yedhijitari inopindirana zvakanyanya uye inopa vatengi ruzivo rwakasiyana rwekuona uye kubata.
Shambadziro yemhando yako inotumirwa kune bhodhi skrini nemagetsi, izvo zvinogona kuitika mumaawa mashoma.Haufanire kutumira posita mavhiki kana mazuva shambadzo yako isati yakwira.
Unogona Kusimudzira Inopfuura Mharidzo Imwe
Kana iwe uine zvitoro zvakasiyana kana zvigadzirwa zvekusimudzira, unogona kutumira akasiyana shanduro yako nekero uye ruzivo pane imwe neimwe.Unogona kushandisa nguva yako kuratidza zvinopfuura imwe ad.
Kusiyana nemabhodhi echinyakare, bhodhi redhijitari rinokutendera kuti ushandise kusika nehungwaru.Iwe wakavhurika kugadzira zviitiko zvitsva zvinopindirana zvinoita kuti iwe umire kunze kwemakwikwi ako.Saka nekudaro, kusika uku kunobvumira mukana wekukwikwidza.
Nekuwedzera kwemhando mumusika wazvino, panoda mabhizinesi kuti achinjire kune inodiwa vatengi.Biro redhijitari rinowedzera kuoneka kwerudzi rwako, richiturikira kune mamwe madhiri.
Inovandudza Kuziva Kwemhando
Kana uchitsvaga kuvaka brand yako uye kuwedzera ruzivo rwemhando, bhodhi redhijitari ndiyo nzira yekuenda nayo.Dhijitari mabhodhi anobvumira kugadziridzwa kweaudiovisual kutaurirana, izvo zvinowedzera kusimbisa brand yako mumaziso uye munzeve dzevateereri vako.
Inowedzera Kudzoka pa Investment
A digital LED bhodhikazhinji inoyevedza kupfuura bhodhi remazuva ese.Inoshandisa audiovisual kutaurirana kupfuudza meseji.Saka nekudaro, inokwezva vatengi vakawanda uye inotungamira.Pakupedzisira, mamwe anotungamira anoshandura kune yakawedzera kutendeuka uye yakakwira ROI.
Dhijitari bhodhi bhodhi inogona kuve mari yakakura kana ikaiswa munzvimbo chaiyo.Chinhu chakakosha pakuona nzvimbo yakanakisa kuziva vateereri vako.Chengetedza vateereri vako mundangariro pese paunoisa yako yedhijitari bhodhi.Pazasi pane nzvimbo shoma dzaunogona kuisa yako yedhijitari bhodhi kuti uwedzere kuoneka uye kubatanidzwa:
1. Migwagwa yemahara/ ichangobuda mumugwagwa mukuru.Kuisa kumusoro adigital LED bhodhimunzvimbo yakadai inokupa iwe kuwana kune dzakasiyana siyana dzevatengi.Munhu wese anotyaira ane zvaanoda zvakasiyana.Iwe unonyanya kuzadzisa chinodiwa chikuru chehuwandu hwevanhu vanotyaira mumigwagwa.
2. Pedyo nezviteshi zvechitima uye zviteshi zvemabhazi.Kana chigadzirwa chako chine kukwezva kwakawanda uye chisina kunyatso kurongerwa kune yakatarwa huwandu hwevanhu, zvifambiso zvevoruzhinji zvinofanirwa kunge zviri sarudzo yako yakanaka.
3. Pedyo nemahotera uye nzvimbo dzekutengesa.Nzvimbo dzevashanyi uye dzekutengesa, kunyanya idzo dziri munzvimbo dzedhorobha, inzvimbo dzekutanga dzemabhodhi edhijitari.
4. Pedyo nezvikoro kana zvivako zvehofisi.Kana mhando yako yakanangana nevadzidzi vadiki kana vashandi vemuhofisi, saka kuisa bhodhi padyo nemasangano avo isarudzo yakanaka.
Chaizvoizvo, iwe unoda kuisa adigital LED bhodhiuko kune traffic yakakura yetsoka.Kana vanhu vakawanda vachiwana mukana wekuona kubhodhi rezvikwangwani, ndiko kuwedzera mikana yekuwedzera kuonekwa.
Bhodhibhodhi rekunze redhijitari rinowanzoita mari inosvika $280,000.Nekudaro, izvi zvinoenderana nenzvimbo, saizi, kujeka / kunaka kweiyo skrini tekinoroji, uye nguva yekuratidzira.
Kana uchida kushambadza padigital LED bhodhi, tarisira kubhadhara pakati pe $1,200 kusvika $15,000 pamwedzi.Mutengo uchaenderana nenzvimbo yedhijitari bhodhi.Nechinofadza, iyo Return on Investment (ROI) yakakwira kana uchishandisa mabhodhi edhijitari pane echinyakare mabhodhi.
Zvinoenderana neKunze Kwemusha Kushambadzira Association of America(OOHAA), kushambadzira-kunze-kusanganisira mabhodhi edhijitari-kunogona kubatsira mabhizinesi kuona 497% ROI maererano nemari.
1. Kuonekwa kwebhiribhodhi
Kana wakoLED bhodhiine kuoneka kushoma, ichava nemhedzisiro inorema pakuti ichagadzira inotungamira here kana kuti kwete.Sarudza nzvimbo isina kukanganisa kunoonekwa uye ona kuti bhodhi redhijitari rakatarisa kumberi.Chinonyanya kukosha, iva nechokwadi chokuti bhodhi rinoiswa panzvimbo inoverengwa.
2. Traffic kuverenga kwenzvimbo
Tsvagurudza uye tsvaga maprofayiri emunzvimbo.Iwe unogona ipapo kushandisa iyo traffic data kuziva kune inorema tsoka kana mota traffic uye nekuwedzera nzvimbo yedhijitari bhodhi yekushambadzira.
3. Funga nezvehuwandu hwevateereri vako
Chinhu chakakosha chekushambadzira kunzwisisa vateereri vako.Zvakakosha kuti utaure shoko chairo kuvanhu chaivo.Kana uchinge wanyatsonzwisisa huwandu hwevateereri vako senge murume kana mukadzi, zera, dzidzo, mamiriro ewanano, kana muhoro wepakati, unogona kufunga nezvenzvimbo inoenderana navo.
4.Kuva pedyo nenzvimbo yako yebhizimisi
Kusarudza yekumisikidzwa kwenzvimbo yekushambadzira isarudzo ine musoro kana iwe uchida kukwezva vatengi kunzvimbo yako yebhizinesi.Kana bhizinesi rako richivimba nevatengi vemunharaunda, kuisa bhodhi redhijitari mamaira makumi mashanu kubva ipapo hazvingaite.
Digital billboardkushambadza inzira yechimanjemanje kune yakajairwa mabhiribhodhi advertising.Iyo inzira yakanaka yekusvika kune vakawanda vateereri munguva pfupi pfupi inobvira.Kufanana nechero imwe nzira yekushambadzira, zvakakosha kutora nguva yako uye tsvagurudza yese mativi anoenderana nedhijitari bhodhi bhodhi kushambadzira.Pakupedzisira, mabhizinesi mazhinji ari kusarudzira mabhodhi edhijitari nekuda kwekuchinjika kwavo, nyore, uye kuwedzera ROI.
Led Sign Led Display Led Display Screen Kunze Led Display Kunze Led Screen Led Screen